6 -da cayaar ee ugu wanaagsan ee lagu qurxiyo timaha ee Android | Androidsis
6-da kulan ee ugu wanaagsan ee timaha loogu talagalay Android
Haaruun Rivas | | Aaladaha Android, Ciyaaraha Android
Mar labaad waxaan ku soo laabannaa liis ciyaaro si aan u dilno daqiiqadaha caajisnimada ah ee aad u quusan kara in ka badan hal. Waana in hadda aan soo bandhignay ururinta 6 -da cayaar ee ugu wanaagsan saloon ee timaha loogu talagalay Android, si aad ugu mashquusho timaha timaha iyo tan oo ah qaabab kala duwan.
Dhammaantood waa bilaash, waxaa laga heli karaa Google Play Store oo, dabcan, waa kuwa ugu caansan qaybtooda. Isla mar ahaantaana, waxay ka mid yihiin kuwa la soo dejisto oo leh dheelitirka ugu fiican.
Hoos waxaad ka heli doontaa taxane ah 6 -da cayaar ee timaha ugu fiican ee loogu talagalay taleefannada casriga ah ee Android. Waxaa xusid mudan, sida aan had iyo jeer sameyno, taas dhammaan kuwa aad ka heli doontid qoraalkan uruurinta waa bilaash. Sidaa darteed, uma baahnid inaad foorjirto wax lacag ah si aad u hesho mid ama dhammaantood.
Si kastaba ha ahaatee, mid ama in ka badan ayaa lahaan kara nidaamka micropayment gudaha, taas oo u oggolaan doonta helitaanka waxyaabo badan oo ku jira dhexdooda, iyo sidoo kale helitaanka fursado badan oo ciyaarta heerarka ah, walxo badan, abaalmarino iyo abaalmarino, iyo waxyaabo kale. Sidoo kale, lagama maarmaan ma aha in la bixiyo wax lacag ah, waxaa mudan in lagu celiyo. Hadda haa, aan u tagno.
1 Timo jaraha - Salonada Quruxda
2 Salon Timaha: Ciyaaraha Dharka ee Gabdhaha
3 Salon Quruxda Timaha: Ciyaaraha Gabdhaha
4 Stylist -ka Dharka Timaha Leh - Ciyaaraha Salon
5 Gabdhaha Timo Jaraha
6 Salon Hair Hair 2
Timo jaraha - Salonada Quruxda
Ciyaartan ayaa ka mid ah kuwa loogu jecel yahay Dukaanka Play-ka, mana aha kaliya noocyadiisa, laakiin bakhaarka oo dhan, maadaama ay leedahay in ka badan 50 milyan oo la soo dejisto waxayna leedahay sumcad 4-xiddig ah oo ku saleysan in ka badan 180 kun oo faallo.
Cinwaankan waa inaad ka shaqaysaa saloon qurxinta oo ay tahay inaad adeegsato dhammaan farsamooyinkaaga si aad shaqo wanaagsan timo -jarka ugu qabato dhammaan macaamiisha soo gasha. Sidoo kale waa inaad maareysaa meesha oo aad hubisaa in macmiil kasta uu qurux badan yahay, dhalaalaya oo diyaar u yahay dhacdo kasta oo gala ama ama, si fiican, maalinta ugu wanaagsan ee maalintooda.
Kaliya maahan inaad daryeesho timo -jareynta, in kasta oo tani ay tahay mawduuca ugu weyn ee saloon -qurxinta, laakiin sidoo kale dhinacyada kale ee macaamiisha, sida moodada, kabaha, dharka iyo dharka, qurxinta iyo wax kaloo badan. Qolka quruxdaadu waa macbud qof kastaa ku raaxaysan karo min madax ilaa suul.
Waxaad leedahay saloon isboorti oo leh aalado aad u kala duwan si aad u abuurto curlado cajiib ah oo aad timahaaga u dhaqdo. Hal -abuurka ayaa ciyaaraya door muhiim ah, markaa u oggolow mala -awaalkaagu inuu u ordo oo sameeyo dhammaan timaha aad rabto, laga bilaabo kuwa ugu xiisaha badan ilaa kuwa ugu xarragoonaya. Waa farshaxan, markaa waqti qaado si aad macaamiishaada u eegto sida aad rabto.
Salon Timaha: Ciyaaraha Dharka ee Gabdhaha
Saloon qurux badan oo leh macaamiil badan ayaa ah waxa aad ku yeelan doonto ciyaartan. Hippy waa hippo qurux badan oo qosol badan. Waxay jeceshahay wax kasta oo ku lug leh timo -jarka iyo timaha, iyo weliba quruxda guud ahaan. Taasi waa sababta uu u shaqeeyo saloon gabdhaha taas oo ay ku iftiimiso, oo waajibkaagu waa inaad ka caawiso hawlaheeda, u sheeg oo ku amro wax kasta oo ay leedahay inay ku samayso sidaad jeceshahay.
Dhaq timaha macaamiishaada oo ku dar alaabta qurxinta si ay u noqoto mid dhalaalaysa, ka xoog badan oo dhumuc weyn leh. Sidoo kale ha male -awaalkaagu ha u ordo ciyaartan Oo adigu samee wax adiga kuu gaar ah si aad u ogaato oo qof kasta oo ka soo gala albaabka saloon u ekaado mid aad u qurux badan marka laga baxayo.
Samee timo badan oo tijaabi qaabab badan, laga soo bilaabo tan ugu xarragoona illaa ugu dhiiranaanta, iska caadi iyo waalan ee aad qiyaasi karto. Samee curlaamyo kaamil ah, hirar, timaha toosi, sii mugga ama goynta oo gebi ahaanba beddelaya qaabka. Halkan waxaad ku tijaabin kartaa wax walba adiga iyo Hippy; kaliya u ogolow timo -jarahaaga ama timo -jarahaagu inuu sabeeyo.
Timo Jaraha: Ciyaaraha Fashionka
Developer: Ciyaaraha Hippo Kids
Salon Quruxda Timaha: Ciyaaraha Gabdhaha
Ciyaar kale oo timo -jarka loogu talagalay Android oo ku jirta Dukaanka Play -ka waa salon qurxinta timaha: ciyaaraha gabdhaha, beddel kale oo aad u wanaagsan oo ay tahay inaad ku ciyaarto si aad u noqoto timo -jare xirfadle ah, in kasta oo halkan aad ku haysato dhammaan xorriyadda aad ku muujin karto xirfadahaaga iyo farsamooyinka stylist -ka.
U maamul qolkaaga qurxinta sida aad rabto oo u fidiso adeegyadaada dhammaan macaamiishaas codsada. U shaqee intaad jeceshahay oo ka tag qurux iyo qurux dhammaan kuwa gacmahaaga soo mara. Waxaad abuuri kartaa tan oo u gaar ah, waalan, madadaalo, majaajilo, xarrago leh, iyo qaabab qurux badan. Xadka waa cirka.
Sidoo kale waad qaban kartaa timo kala duwan oo samee dhammaan goynta aad rabto. Isku qas oo isku dhig iyaga ilaa aad ka heshid midka aad malaysay. Dhanka kale, waxaad haysataa qalab badan oo kaa caawiya inaad gaarto yoolalkaaga. Oo waa inaad haysataa timo -hagaajin tiro badan, maqas, biraha wax lagu dubo, qalajiyaha iyo wax kasta oo aad malayn karto. Samee isbeddello badan oo qaab -dhismeedka ah oo noqo timo -jaraha ugu fiican adduunka ciyaartan.
Stylist -ka Dharka Timaha Leh - Ciyaaraha Salon
Dukaanka Google Play waxaa ku yaal ciyaaro badan oo timo jarka loogu talagalay Android. Qaar ka mid ah kuwa ugu fiican ayaa ah kuwa aan horay ugu soo sheegnay liiskan, tanina ma aha mid ka reeban xeerka, oo ah ikhtiyaar kale oo wanaagsan oo aad kaga tagto caajisnimada inta aad abuureyso timo kala duwan iyo qaabab soo jiidasho leh saloon qurux badan oo leh dhammaan qalabkii kaa dhigi lahaa inaad u soo baxdo sidii timo -jaraha gabadha weyn.
Mid ka mid ah waxyaabaha gaarka u ah ciyaartan timo -jarka ayaa ah in dhexdeeda aad uga soo bixi karto si ka sii fiican oo ka fiican tidcan marka loo eego waxyaabaha kale. Baro sida loo sameeyo braids kala duwan si fudud oo dhaqso leh, ciyaarta iyo nolosha dhabta ah labadaba. Waxaad ka dooran kartaa dhowr nooc oo tidcin si aad xirfadahaaga u siiso. Tababaro, ku tababar oo noqo khabiir ku takhasusay timaha iyo tidcinta ciyaartan.
Dhinaca kale, adeegso daawaynta quruxda kala duwan ee aan ku xirnayn timo -jareynta. Samee dhaqidda timaha, daryeelka wejiga iyo codsiyada qurxinta, iyo waxyaabo kale. Waa saloon qurux badan oo dhammaystiran. Taa baddalkeeda, waxaad leedahay qol aad u ballaaran oo ballaadhan oo aad ka heli doonto dhar badan, dhar iyo agabyo badan si aad gabadhaada u siiso taabasho ifaya oo aad u eegto dhammaan noocyada dhacdooyinka raaxada iyo xarrago leh.
Ciyaaraha timaha lagu qurxiyo
Developer: Beerta Hal-abuurka leh
Gabdhaha Timo Jaraha
Timo -jareynta Gabdhaha waxaad sidoo kale ku leedahay saloon qurxoon halkaas oo aad ka heli doonto wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u oggolaato hal -abuurkaaga iyo male -awaalkaagu inuu duulo oo macmiil kasta iyo gabadh kasta oo u baahan xirfadahaagu u ekaadaan kuwo aad u qurux badan dhacdo kasta oo lama filaan ah ama dhacdo darajo ah.
Ciyaartan waxaad isku dayi kartaa inta u dhaxaysa qaabab badan oo goynta iyo timaha si macaamiishaadu ugu faraxsan yihiin muuqaalkooda. Intaa waxaa dheer, waxaad samayn kartaa noocyo kala duwan oo daaweyn ah oo aad fulin kartaa farsamooyin fara badan si timaha gabdhahaagu ay u noqdaan kuwo cajiib ah. Kaliya isticmaal alaabooyinka timaha kala duwan si timuhu u helaan iftiin ku filan iyo mugga aad rabto. Intaa waxaa dheer, waxaad isbarbardhigi kartaa timaha timaha ka hor iyo ka dib, oo go'aanso sida wanaagsan ee natiijooyinkaagu u noqdeen.
Dhinaca kale, waxay leedahayWaa dukaanka qurxinta iyo dharka si aad u dooran karto waxa aad u malaynayso inay ugu fiican yihiin macaamiishaada waxayna ku farxi doonaan qaabka aad u siiso. Ku tababar oo kor u qaad xawaaraha si aad uga mid noqoto timo -jarayayaasha ugu fiican dhammaan.
Salon Hair Hair 2
Si aan u dhammaystirno qoraalkan soo -uruurinta ee timaha timo -qurxinta ugu fiican ee loogu talagalay Android ee Dukaanka Play -ka, waxaan leenahay Magical Hair Salon 2: Girl Makeover & Dress up, cinwaan kale oo caan ku ah bakhaarka oo ku saleysan in ka badan 5 milyan oo la soo degsado , 4.4 xiddig qiimeyn ah, iyo in ka badan 28 oo faallooyin u badan.
Ciyaartan waxaad sidoo kale si xor ah ugu samayn kartaa qolka qurxinta ee gudaha waa inaad u adeegtaa dhowr macmiil, mid kasta oo leh dalabyo iyo muuqaalo kala duwan oo ay tahay inaad la qabsato si aad isugu daydo inaad siiso habka ugu habboon ee loo jaray iyo timaha.
Iyada oo leh Color Cab, oo ah mid ka mid ah qaababkii ugu dambeeyay ee cinwaankan, waxaad dooran kartaa laba ka mid ah midabada kala duwan ee aad ugu jeceshahay ka dibna isku qas oo abuur mid cusub oo aad u xiiso badan. Intaa waxaa dheer, waxaad u habayn kartaa midabkan, adoo u hagaajinaya inuu noqdo mid khafiif ah ama madow.
Dhinaca kale, qaabka timo -jarka waxaad ku samayn kartaa wax kasta oo aad rabto, laga bilaabo hagaaji timaha si aad timaha u samayso oo aad u taabato macaamiishaada si ay u gaaraan qaabka ugu habboon iyaga. Ku dhaq oo ku qalaji timaha gabdhahaaga Princess Salon Magical Princess, ka dibna timaha ka jar, midab, duub ama toosi timahooda. Haddii aad mar kasta qalad ka samaysid goynta, waxaad haysataa jel korriin timo si aad u goyso kaamil. Markaa ha welwelin haddii aad khalkhal gasho; isla mar ahaantaana, waxay ku saabsan tahay barashada dhammaan farsamooyinka timo -jarka iyo timo -jarista.
Marka la eego, waxay la timaadaa habab kale oo la heli karo si aad u soo saarto fashionistaada gudaha oo aad ugu raaxaysato hab wanaagsan adiga oo mala awaalaya boqolaal qaabab oo kala duwan oo aad ku dabaqi karto sidaad doonto.
Salon Timo sixir ah 2
Developer: Gabdhaha Journey Joy
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » 6-da kulan ee ugu wanaagsan ee timaha loogu talagalay Android
6 -da barnaamij ee ugu fiican Instagram -ka Android